Android ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် မရှိမဖြစ် အခြေခံ App (၁၀) ခု - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > Mobile သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ > Android ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် မရှိမဖြစ် အခြေခံ App (၁၀) ခု
Android ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် မရှိမဖြစ် အခြေခံ App (၁၀) ခု
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 9:03 AM Android application, Mobile သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ
ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ App လေးတွေ သွင်းကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီး Storage နဲ့ Ram ပမာဏကွာခြားတာကြောင့် တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ App တွေ အများကြီးထည့်လို့ မရပါဘူး။ ဒီတော့ Android ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုတာနဲ့ မရှိမဖြစ် ထည့်ကို ထည့်သင့်တဲ့ App (၁၀)မျိုး ကို အခရာကနေ အကြုံပြုလိုက်ပါတယ်
Zapya သုံးလို့ ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ် ဘယ်လို ပြောပြော Zapya ဟာ အသုံးအများဆုံး ထိပ်တန်း File Sharing App တစ်ခုဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ တစ်ခြားသူတွေမှာ ရှိတဲ့ App တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ သီချင်းတွေကို ငွေကုန်ကြေးကျမှုမရှိဘဲ ယူလို့ ရတယ်လေ။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး လျင်မြန်တယ်လေ။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ App သူများဆီမှာ မရှိရင်တော့ တစ်နေရာရာက ဒေါင်းရတော့မှာပါပဲ။ Android ဖုန်းတွေအတွက်တော့ Google Play Store ဆိုတာ ရတနာသိုက်ကြီးပါ။ သူ့ဆီမှာ App နဲ့ Game မျိုးစုံကို အမျိုးအစားခွဲထားပြီး Gmail Account နဲ့ Sign in လုပ်ရုံနဲ့ အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။
Facebook App ကတော့ အထူးပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ Social Network ဖြစ်တဲ့ Facebook မှာ ပုံတင်မယ်၊ အတွေ့အကြုံတွေ Status တင်မယ်၊ သူများရေးထားတဲ့ စာတွေ ဖတ်မယ်ဆို Facebook ကို ရယူထားလိုက်ပါ။
Messenger နဲ့ Facebook ဆိုတာ နှစ်လွှာပေါင်းမှ တစ်ရွက်ဆိုသလိုပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောမယ်၊ Group Chat လုပ်ပြီး ဆွေးနွေးမယ်။ အခုဆို Doodle ဆွဲတာတွေ ဘာတွေပါရတော့ ဥာဏ်ကွန့်မြူးလို့ ပိုရလာပါပြီ။ My Day function နဲ့ Secret Conversation တွေလည်း သုံးလို့ ရပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေရော၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေ အတွက်ရော Gmail App ဟာ မရှိမဖြစ်ပါ။ ဖုန်းလေးထဲမှာတင် email တွေ စစ်လို့ရ၊ Compose လုပ်လို့ရ၊ Reply ပြန်လို့ ရလို့ Gmail ကိုလည်း ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။
You May Also Like : ” Android ဖုန်းများအတွက် အကောင်းဆုံး Photo Editor Application ၈မျိုး”
အခုလို 3G တွေ၊ 4G တွေ Operator တွေက အပြိုင်အဆိုင်ပေးနေတဲ့ ခေတ်မှာ Google Maps ကို သေချာသုံးသင့်ပါတယ်။ GPS လေး ဖွင့်ပြီး ကိုယ်သွားမယ့် နေရာတွေ သိနိုင်သလို၊ သွားမယ့် လမ်းကြောင်းတွေသာမက အကြမ်းဖျင်း ကြာချိန်ကိုပါ သိနိုင်လို့ပါ။
Messenger ကနေ ဖုန်းခေါ်လို့ ရပြီ ဆိုပေမယ့် ဒီမူလလက်ဟောင်း VoIP App ကို ပစ်ပယ်ထားလို့ မရသေးပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်းဆို မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပါ Support လုပ်တဲ့ Sticker လေးတွေ၊ Emoji လေးတွေပါ ထပ်ထည့်ထားတဲ့ အတွက် ပိုတောင် သုံးလို့ ကောင်းလာပါသေးတယ်။
8. MPT/Ooredoo/Telenor App
ဒါကတော့ ကိုယ်သုံးစွဲတဲ့ Operator ပေါ် မူတည်ပြီး ရယူထားသင့်တဲ့ App ပါ။ မဟုတ်ရင် ဘယ်လို Internet Package ဝယ်ရမလဲ၊ ဖုန်းဘေလ် ဘယ်လို လွှဲပေးရမလဲ၊ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုတွေ ဘယ်လိုရယူမလဲဆိုတာ တစ်ခုချင်းစီ လိုက်ရှာနေရမှာပေါ့။
ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အင်တာနက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရတွေ အများကြီးနဲ့ ကြုံမှာပါပဲ။ ဒီတော့ တစ်ခုခုကြွယ်တော့မယ်ဆိုရင် Dictionary App တစ်ခုကတော့ လိုမှာပါပဲ။ Ornagai ကတော့ Dictionary App တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာ ကနေ အင်္ဂလိပ်၊ အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အရင်လို Dictionary စာအုပ်ကြီး လက်က တကိုင်ကိုင် လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
10. 360/ Cymera/ Meitu
ဒါကတော့ ဒီလိုမျိုး Selfie လှလှ ခေတ်စားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး Facebook ပေါ်တင်လို့ ရတဲ့ အထိ ရုပ်ထွက်လှလှ ထွက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ App လေးတွေပါ။ Effect အလန်းစားတွေနဲ့ Frame တွေပါ ရွေးလို့ရတော့ ခေတ်လူငယ် ကောင်လေးတွေရော၊ ကောင်မလေးတွေရော အသေကြိုက်စရာပေ့ါ။
အခရာပရိသတ်ကြီးလည်း ဘယ် App တွေကတော့ နောက်ထပ် မရှိမဖြစ်အနေနဲ့ ပါသင့်တယ်၊ ဘယ် App တွေကတော့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့ အကိုက်ပဲဆိုတာလေး Comment မှာ မျှဝေပေးသွားပါဦးခင်ဗျာ။
ဖုနျးတဈလုံးဝယျပွီဆိုတာနဲ့ ကိုယျကွိုကျတဲ့ App လေးတှေ သှငျးကွတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဖုနျးအမြိုးအစားပျေါလိုကျပွီး Storage နဲ့ Ram ပမာဏကှာခွားတာကွောငျ့ တဈခြို့ဖုနျးတှမှော App တှေ အမြားကွီးထညျ့လို့ မရပါဘူး။ ဒီတော့ Android ဖုနျးတဈလုံးဝယျပွီဆိုတာနဲ့ မရှိမဖွဈ ထညျ့ကို ထညျ့သငျ့တဲ့ App (၁၀)မြိုး ကို အခရာကနေ အကွုံပွုလိုကျပါတယျ
Zapya သုံးလို့ ဘာဖွဈတယျ၊ ညာဖွဈတယျ ဘယျလို ပွောပွော Zapya ဟာ အသုံးအမြားဆုံး ထိပျတနျး File Sharing App တဈခုဆိုတာ ငွငျးလို့ မရပါဘူး။ တဈခွားသူတှမှော ရှိတဲ့ App တှေ၊ ဓာတျပုံတှေ၊ သီခငျြးတှကေို ငှကေုနျကွေးကမြှုမရှိဘဲ ယူလို့ ရတယျလေ။ အသုံးပွုရလှယျကူပွီး လငျြမွနျတယျလေ။
ကိုယျလိုခငျြတဲ့ App သူမြားဆီမှာ မရှိရငျတော့ တဈနရောရာက ဒေါငျးရတော့မှာပါပဲ။ Android ဖုနျးတှအေတှကျတော့ Google Play Store ဆိုတာ ရတနာသိုကျကွီးပါ။ သူ့ဆီမှာ App နဲ့ Game မြိုးစုံကို အမြိုးအစားခှဲထားပွီး Gmail Account နဲ့ Sign in လုပျရုံနဲ့ အလှယျတကူ ဒေါငျးလုပျလုပျယူလို့ ရပါတယျ။
Facebook App ကတော့ အထူးပွောစရာလိုမယျ မထငျပါဘူး။ Social Network ဖွဈတဲ့ Facebook မှာ ပုံတငျမယျ၊ အတှအေ့ကွုံတှေ Status တငျမယျ၊ သူမြားရေးထားတဲ့ စာတှေ ဖတျမယျဆို Facebook ကို ရယူထားလိုကျပါ။
Messenger နဲ့ Facebook ဆိုတာ နှဈလှာပေါငျးမှ တဈရှကျဆိုသလိုပါပဲ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ စကားပွောမယျ၊ Group Chat လုပျပွီး ဆှေးနှေးမယျ။ အခုဆို Doodle ဆှဲတာတှေ ဘာတှပေါရတော့ ဉာဏျကှနျ့မွူးလို့ ပိုရလာပါပွီ။ My Day function နဲ့ Secret Conversation တှလေညျး သုံးလို့ ရပါတယျ။
ကြောငျးသားတှရေော၊ အလုပျလုပျနတေဲ့ သူတှေ အတှကျရော Gmail App ဟာ မရှိမဖွဈပါ။ ဖုနျးလေးထဲမှာတငျ email တှေ စဈလို့ရ၊ Compose လုပျလို့ရ၊ Reply ပွနျလို့ ရလို့ Gmail ကိုလညျး ထညျ့ထားသငျ့ပါတယျ။
You May Also Like : ” Android ဖုနျးမြားအတှကျ အကောငျးဆုံး Photo Editor Application ၈မြိုး”
အခုလို 3G တှေ၊ 4G တှေ Operator တှကေ အပွိုငျအဆိုငျပေးနတေဲ့ ခတျေမှာ Google Maps ကို သခြောသုံးသငျ့ပါတယျ။ GPS လေး ဖှငျ့ပွီး ကိုယျသှားမယျ့ နရောတှေ သိနိုငျသလို၊ သှားမယျ့ လမျးကွောငျးတှသောမက အကွမျးဖငျြး ကွာခြိနျကိုပါ သိနိုငျလို့ပါ။
Messenger ကနေ ဖုနျးချေါလို့ ရပွီ ဆိုပမေယျ့ ဒီမူလလကျဟောငျး VoIP App ကို ပဈပယျထားလို့ မရသေးပါဘူး။ ခုနောကျပိုငျးဆို မွနျမာနိုငျငံအတှကျပါ Support လုပျတဲ့ Sticker လေးတှေ၊ Emoji လေးတှပေါ ထပျထညျ့ထားတဲ့ အတှကျ ပိုတောငျ သုံးလို့ ကောငျးလာပါသေးတယျ။
ဒါကတော့ ကိုယျသုံးစှဲတဲ့ Operator ပျေါ မူတညျပွီး ရယူထားသငျ့တဲ့ App ပါ။ မဟုတျရငျ ဘယျလို Internet Package ဝယျရမလဲ၊ ဖုနျးဘလျေ ဘယျလို လှဲပေးရမလဲ၊ Ring Tune ဝနျဆောငျမှုတှေ ဘယျလိုရယူမလဲဆိုတာ တဈခုခငျြးစီ လိုကျရှာနရေမှာပေါ့။
ဖုနျးတဈလုံးနဲ့ အငျတာနကျသုံးမယျဆိုရငျတော့ ကိုယျနားမလညျတဲ့ အင်ျဂလိပျ ဝေါဟာရတှေ အမြားကွီးနဲ့ ကွုံမှာပါပဲ။ ဒီတော့ တဈခုခုကွှယျတော့မယျဆိုရငျ Dictionary App တဈခုကတော့ လိုမှာပါပဲ။ Ornagai ကတော့ Dictionary App တဈခုဖွဈပွီး၊ မွနျမာ ကနေ အင်ျဂလိပျ၊ အင်ျဂလိပျကနေ မွနျမာ ဘာသာပွနျပေးနိုငျပါတယျ။ အရငျလို Dictionary စာအုပျကွီး လကျက တကိုငျကိုငျ လုပျစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ဒါကတော့ ဒီလိုမြိုး Selfie လှလှ ခတျေစားနတေဲ့ ခတျေကွီးမှာ ကိုယျရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံလေး Facebook ပျေါတငျလို့ ရတဲ့ အထိ ရုပျထှကျလှလှ ထှကျဖို့ လိုအပျတဲ့ App လေးတှပေါ။ Effect အလနျးစားတှနေဲ့ Frame တှပေါ ရှေးလို့ရတော့ ခတျေလူငယျ ကောငျလေးတှရေော၊ ကောငျမလေးတှရေော အသကွေိုကျစရာပေ့ါ။
အခရာပရိသတျကွီးလညျး ဘယျ App တှကေတော့ နောကျထပျ မရှိမဖွဈအနနေဲ့ ပါသငျ့တယျ၊ ဘယျ App တှကေတော့ ပရိသတျကွီးနဲ့ အကိုကျပဲဆိုတာလေး Comment မှာ မြှဝပေေးသှားပါဦးခငျဗြာ။
Crd-Yoe Lu (Akhayar)
Android ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် မရှိမဖြစ် အခြေခံ App (၁၀) ခု Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:03 AM Rating:5ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ App လေးတွေ သွင်းကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီး Storage နဲ့ Ram ပမာဏကြွာ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:03 AM
လက်ကိုင်ဖုန်းကို အိပ်ယာဘေးချ ထားပြီးအိပ်တတ်သူများ ရလာမည့်ဆိုးကျိုးများ
၀ါယာရှော့စ် ကြောင့် ဖြစ်သော မီးဘေး ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အချိန်သုံးမိနစ်ဖြင့် မဖြစ်မနေဖတ်ရှု့ပေးကြပါ